Arison Vonjy : Hampahafantatra an’i « gasyTsara », raki-kirany fahatelo
Naman’i Rasoloarison Vonjison na « Arison Vonjy » efa hatreo amin’ny faha-10 taonany ny sehatry ny mozika satria tamin’izany izy dia efa niara-niantsehatra tamin’ny zokiny. Amin’izao fotoana dia hamoaka ny raki-kirany fahatelo sahady izy.
Mariazy eo amin’ireo raki-kira roa efa navoakany taloha izy io. Tany amin’ny taona 2004 no nivoaka ny « Feno loatra », raki-kirany voalohany, izay efa noketrehina niaraka tamin’ireo andrarezin’ny mozika « jazz » toa an’i Tôty , Silo, Datita Rabeson sy ireo maro hafa. Nandritra ny làlana maro nodiaviny niaraka tamin’ireo mpitendry samihafa dia nisy ny fikarohana ilay fiarahana mitempo ao anatin’ny mozika novohiziny. Ity raki-kira vaovao « gasyTsara » ity dia nalaina avy amin’ny fampisehoana izay notanterahin’ny tarika Arison Vonjy tao amin’ny “American Center” izay misy hafanana kokoa ao anatiny noho ny fifampizarana amin’ireo mpitendry sy ny mpijery izay niaraka tao. Efa hatramin’ny taona 2015 moa ity raki-kira ity no noketrehina ary mitondra ny gadona “funky” ka izao tontosa soa aman-tsara izao. Hisy izany ny “gasyTsara Tour” hotanterahin’ny tarika entina hampahafantarana ity raki-kira ity. Seho voalohany ho atolotr’izy ireo amin’izany ny etsy amin’ny IFM Analakely amin’ny 05 aprily ho avy izao, manomboka amin’ny 7 ora hariva. Hitondra ireo hira am-polony mahery mandritra ny seho i Arison Vonjy miaraka amin’i Harty Andriambelo eo amin’ny gitara “basse” sy “melodica”, i Nali Rabarison kosa eo amin’ny amponga maro anaka, i Dovs Rakotondraina no hitendry ny vata maro afitsoka. Seho ho fisantarana izy ity fa voalohany ahafahana mankafy ireo hiran’i Arison Vonjy vaovao ihany koa.